Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamadda ICC oo Laga Dalbaday In Ay Baadho Xasuuqii Gaza
Maxkamadda ICC oo Laga Dalbaday In Ay Baadho Xasuuqii Gaza
Posted by ONA Admin	/ May 23, 2018
Wasiirka arrimaha dibedda ee falastiin Riyad al-Malki ayaa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Hague ka dalbaday in ay baadhitaan ku sameyso waxa uu ku tilmaamay in ay tahay dambi dagaal oo ay geysatay Israel.
Waxa uu dacwad oogaha maxkamadda u sheegay in dib loo raaco dambiyada la qariyay oo ay ka midka yihiin dhul balaadhsiga iyo waxa uu ku tilmaamay bartilmaameedsiga dibed baxayaasha aan hubeysnayn khaasatan kuwii ka dhacay garoonka Gaza.
Maxkamadda ICC ayaa furtay baadhitaan ku aadan xaaladda Gaza seddex sano ka hor kadib dagaalkii Gaza ee 2014–kii. Wasiirka arrimaha dibedda ee Israel ayaa sheegay in tallabadaan ugu dambeysay ee falastiin ay qaaday ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dhimashadii ugu badnayd ay Qasa ka dhacday tan iyo dagaalkii 2014-kii, masuuliyiinta Falastiinna waxay sheegeen in ciidammada Israa’iil ay dileen 55 ruux ayna dhaawaceen 2,700 oo kale.
Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in milatarigiisu ay iska difaacayeen Xamaas oo jihaad doon ah oo uu ku sheegay in ay doonayaan in ay burburiyaan Israa’iil. Hogaamiyaha Falastiin ayaa cambaareeyay kuna tilmaamay “xasuuq”. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay “in uu dhacay xadgud laga cadhoodo oo xuquuqda aadanaha ka dhan ah”.